Ny Nosy Canary dia 'azo antoka' hoy ny minisitra satria olona 5,000 no nandositra ny fipoahan'ny La Palma
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Ny Nosy Canary dia 'azo antoka' hoy ny minisitra satria olona 5,000 no nandositra ny fipoahan'ny La Palma
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
"Tsy misy fameperana ny fandehanana any amin'ny nosy… ny mifanohitra amin'izay, mampita vaovao izahay mba hahafantaran'ny mpizahatany fa afaka mandeha any amin'ilay nosy izy ireo ary mankafy zavatra tsy mahazatra, mahita izany ho azy ireo," hoy ny minisitry ny fizahan-tany Espaniola, Reyes Maroto.
Ny fipoahan'ny volokano La Palma dia namotika trano 20 farafaharatsiny ary nanery ny famoahana olona 5,000 XNUMX.
Hatreto dia efa namindra olona manodidina ny 5,000 avy amin'ny tanàna maro any El Paso sy Los Llanos de Aridane ny tompon'andraikitra.
Raha ny filazan'ny minisitry ny fizahantany espaniola, Reyes Maroto, dia azo antoka ny fitsidihana ireo Nosy Canary ary misy fipoahana volkano any "fampisehoana mahafinaritra".
Ny fipoahan'ny volkano tao amin'ny nosy La Palme, nosy Canary, dia namotika trano 100 farafahakeliny ary nanery ny famoahana olona 5,000 XNUMX, miaraka amina anjatony hafa atahorana noho ny fitomboan'ny lava, izay antenaina koa fa hitarika entona misy poizina rehefa tonga any amin'ny ranomasina .
Ny ben'ny tanànan'i El Paso, La Palma, Sergio Rodriguez Fernandez dia nampitandrina fa tandindomin-doza ny vohitra manodidina an'i Los Llanos de Aridane, miaraka amin'ireo tompon'andraikitra "manara-maso ny lalan'ny lava" taorian'ny fipoahan'ny volokano tamin'ny alahady tolakandro.
Ny sary nalaina taorian'ny fipoahana dia nampiseho lava nanidina metatra an-jatony tany amin'ny rivotra, nandefa potipoti-volkano nankany amin'ny Oseana Atlantika ary nankany amin'ireo faritra be mponina ao La Palma, ampahany amin'ny Nosy Canary Espaniola.
Nahavita namindra olona manodidina ny 5,000 avy amin'ny tanàna maro any El Paso sy Los Llanos de Aridane ny tompon'andraikitra. Raha mbola miparitaka ny lava dia tsy misy famindran-toerana intsony kasaina amin'izao fotoana izao. Tsy nisy kosa ny naratra na namoy ny ainy, raha ny filazan'i Nemesio Perez, volcanology, dia nilaza fa tsy misy antenaina raha mbola mitondra tena tsara ny olona.
Mpizaha tany 360 eo ho eo no navotsotra avy tao amin'ny toeram-pialan-tsasatra iray tao La Palma taorian'ny fipoahan'ny fipoahana ary nentina an-tsambo ho any amin'ny nosy Tenerife akaiky ny alatsinainy teo, hoy ny mpitondra tenin'ny mpikarakara ferry Fred Olsen.
Mpizahatany 180 hafa no azo esorina ao La Palma ny atoandro, hoy ihany ny mpitondra teniny.